Bakteeriyada Dufanka Dufanka ah Cuntada Busbus
Roodhi degdeg ah
Maqaarka Dufanka Dufanka leh
Baro sida loo sameeyo buskudka dufanka "Fluffy Buttermilk" si ay ugu adeegto quraacda, qadada, ama cashada. Buttermilk waxay ka caawisaa samaynta buskudka qoyan iyo jilicsan sababta oo ah waxay ku daraysaa acid si cajiinka ah. Aashitadaas waxay ka caawisaa ka hortagga gluten, borotiinka burka, ka sameysma badan. Glucen badan oo buskud ah ayaa ka dhigaya buskudul adag.
Cun macaan ayaa loo adeegsadaa cuntadan , sababtoo ah waxay leedahay borotiin ka yar tan caadiga ah oo dhan, taas oo ka dhigaysa buskud yar. Kareemka waxaa lagu daraa sababta oo ah dufanku wuxuu ka caawiyaa maadooyinka kala duwan ee gluten; mar kale, samaynta makiinada buskudka.
Waxaa muhiim ah in subagga, subagga, iyo kareemka ay yihiin kuwo aad u qabow marka loo eego maaddooyinka qallalan ee ku jira buuggaan. Maaddooyinka qabowgu waxay ku hayaan subagyada yar yar, sidaas darteed waxay u dhalaalaysaa sida buskudka duban, buskudka ayaa horumariya lakabyada qulqulka leh.
U adeegso buskudka cajiibka ah ee kuleylka leh foornada leh subag badan, malmal ama malab, iyo shaaki yar.
Waxa aad u Baahantahay
1-1 / 4 koob oo idil oo dhan ah
3/4 koob oo bur ah
2 qaado oo budada dubista
1/2 qaado shaah yar oo soodhaha leh
1/2 qaado shaaha
2/3 koob oo ah subag, qabow
1/2 koob oo ah buttermilk qabow
1/4 koob oo kareem culus oo culus
1/4 koob oo dhalaalay subagga
Foorno kulul ilaa 425 ° F. Xaqiiji in foornada foornadu ay ku taal bartamaha foornada.
In baaquli weyn, isku dar burka (hubi inaad si sax ah u cabbirid !), Burka cake, budada dubista, baking soda, sonkorta iyo cusbo. Isku qas kaneecada ama xargaha ilaa intaad isku dhafan tahay.
Subagga COLD subagga ku jar qaybo yaryar oo isku daadi isku dar ah.
Isticmaal farahaaga farahaaga, laba mindi (mid mindi gacanta mid kasta gacanta ku qabo), ama shukulaatada kareemka ah, ku dhaq mashiinka burka si dhakhso ah ugu dar foornada illaa uu u egyahay daloolka, oo leh qaybo badan oo subag leh oo weli muuqata.
Marka aad bilowdo geeddi-socodkan, waxay u muuqataa in aysan waligeed shaqayn doonin, laakin sii wad! Xaddiga burka ilaa baruurta waa sax.
Ka dibna ku walaaq digaagada iyo kareem culus oo fargeeto ah oo kaliya ilaa inta isku dhafan ay sameyso kubbadda jilicsan, oo dheg dheg leh. Ha ku qasbin cajiinka aadka u badan ama buskutku waa mid adag!
Ku rid cajiinka si aad u qallajisan shaqada oo u kala qeybso 12 qaybood oo siman, adigoo isticmaalaya gacmo khafiif ah.
Ku dhaji kubadaha cajiinka leh ee gacmaha lagu riixo dhowr jeer si aad u fuushaan oo u samee kubad adag, ka dibna mid waliba ku dhaji warqad cookie ah oo ku saabsan qiyaasta 1 inji.
Ku ciriiri dusha sare ee buskudka. Dubo 425 ° F ilaa 10-14 daqiiqo ilaa ay ka soo baxaan buskudka. Ku cad cagaar badan oo u adeega isla markiiba.
Tilmaamaha Nafaqada (adeeg kasta)
Fatuurad la ruxay 11 g
Kolestarool 44 mg
Carbohydrateska 12 g
Fiber diirran 1 g
(Macluumaadka nafaqada ee kusaabsan raashinkeena waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la isticmaalayo xog-ururin sheyga ah waana in loo tixgeliyaa qiyaasta.
Blueberry iyo Zucchini Quick Bread
Waxyaabaha Kibista Kalluunka Kalluumeysiga
Cunto Khudradeed Rooban
Moiste Banana Bread with Ghee
Rising Rising Sourdough Root
Baking Mix Beerka
Quraac & Brunch
Waa maxay kala duwanaanshaha u dhexeeya dhadhanka iyo macmacaanka?
Saliid Bariis ah oo Salad leh Dharka Lemon
Isku Dhiibin Ginger Cocktail oo leh Gacanka DIY Ginger Vodka
Diyaarso Qadada Cunto Caafimaad leh oo aan Cafimaad lahayn oo Cunto-Galmada ah
Mid ka mid ah Bacaha Mediterranean-Gluken-Free Digaag
Cunto Hilibka Digaaga ah
Qodobbada Hal Meey Qadida ah
Easy Cheddar Cake Cauliflower
Abaalmarinta Maalinada Maalinta Jacaylka
Buuxinta Bariiska Cherry Pie